Iitattoos zengelosi | Ukuzoba
Susana Garcia | | IiTattoos zonqulo
Los iingelosi zizinto zasentsomini kwaye ngenxa yoko zingumthombo wokhuthazo lweeTattoos ezingenakubalwa. Kuqhelekile kuthi ukuba sisebenzise izinto ezingekhoyo kwiitatoo, kuba zihlala zitsalela kuthi kuloo mfihlakalo zinayo. Kodwa ke iingelosi zinezinye iinguqulelo ezininzi kwabo bazinxibayo.
Ezi iingelosi eziqulathwe ziitattoo banako ukusixelela ngezinto ezininzi. Abantu abazinxibayo banokuba nemibono yenkolo kwaye ke bafuna ukunxiba ingelosi ukubakhusela kumvambo kulusu lwabo. Zikwasixelela malunga nobabini bokulungileyo nokubi. Kufuneka kukhunjulwe ukuba iidemon azikho ngaphezu kweengelosi eziwileyo. Ngale ndlela basibonisa ukuba okuhle akukho ngaphandle kobubi. Makhe sibone ukhuthazo kwiitattoos zengelosi.
1 I tattoo yengelosi yanamhlanje
2 Ukuthandaza ingelosi
3 Ingelosi ye-Cupid tattoo
4 Iikerubhi tattoo
5 Ingelosi yokufa tattoo
I tattoo yengelosi yanamhlanje
Le ngelosi isibonisa umfanekiso wanamhlanje kumvambo. Kusetyenziswa imigca enika ukuchukumisa ijiyometri kuyo yonke into, eneenkcukacha ezinkulu kuzo zonke izinto ezichukumisayo. Kwenziwa iinzame zokubamba ingelosi inyukela ezulwini, ngalo mzuzu xa bayinika amaphiko.
Kule meko thina sidibana nengelosi ithandaza. Ngaphandle kwamathandabuzo yitattoo enotyekelo olunenkolo kakhulu, kubantu abakholwayo.
Ingelosi ye-Cupid tattoo
UCupid yingelosi oko kwenza ukuba abantu bathandane nabanye abantu. Ke ingelosi efuzisela uthando.
Kule meko basibonisa ezibini iikherubhi eziyingelosi ekwimo yabantwana. Ziqhelekile kubugcisa ngamanye amaxesha ngabantu abakonwabelayo ukupeyinta abafumana ezi ntlobo zeetattoos.
Ingelosi yokufa tattoo
Kwihlabathi leengelosi kukho amabali amaninzi. Enye ye iingelosi zezokufa, lowo simoyikayo kodwa osoloko ephela esindwendwela. Kule tattoo bayasimema ukuba singalibali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iindidi zeetattoos » IiTattoos zonqulo » IiTattoos eziphefumlelwe ziingelosi
I tattoo yokwenyani, isuntswana lembali